Ndị na-ahụ maka ihe mkpuchi FFP3 na ụlọ ọrụ - China FFP3 Ndị na-eme nkpuchi
Njirimara ： 1. Meltblown akwa na-eji polypropylene dị ka akụrụngwa bụ isi, na dayameta eriri nwere ike iru 0,5-10 micron. Meltblown akwa nwere ezigbo ikuku ikuku ma bụrụ ezigbo ihe mkpuchi. 2. Ejiri otutu ihe ndi ozo, ihe ndi na-adighi ahu aru. 3. Dozie eriri bandeeji na ube a kpuchiri ure ka imegharia ya na iru uzo di iche iche nwere akara eji enwe isi. 4. Ihe mkpuchi nwere ike idobe, idebe ihe ọcha ma dịkwa mma maka iji ya. Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, m ...
Njirimara ： 1. Ejiri ezigbo ngwaahịa dị mma, nke nchekwa, nke dị nro ma dịkwa mma. Ntughari 2. 95%, nye gị mgbochi na mgbochi nke uzuzu. 3. Chebe gị pụọ na mmetọ ikuku na mmetọ ikuku. 4. Eriri eriri na-agbanwe agbanwe na oghere imi na-agbanwe agbanwe maka nha ihu na nha dị iche iche. Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ihe omumu ụlọ ọrụ, SPAs, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg 3. Nchedo megide ...
Atụmatụ ： 1. useme ihe kwa ụbọchị na ebe a na-eme ya. 2. Nzipu nke nje oria 3. Mkpokọ mmịpụta nke mmiri 4. Mmetọ ikuku 5. Ngwa mgbochi Ngwunye: 1. Ngwa: ojiji maka owuwu, Ngwuputa Ngwunye, texka Ngwakọta, Ngwakọta. 2. Ngwa: ndụ ụbọchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg. n'ime nhazi ...